किन पटक पटक भा’सि’न्छ पोखरा ? यस्तो रहेछ कारण
पोखरा/ पोखराको महेन्द्रपुल निवासी माया गुरुङ शनिबार ९३ बर्षीय बुबा भे-ट्न गौंडामुख गइन् । साँझ ६ बजे गौंडामुख गएकी मायालाई उनकी छोरी युकीले राती साँढे ८ बजेतिर फोन गरेर घर अगाडी सडक भा-सि-एको बताइन् । राति नै माया घर फर्कन चाहिन् । घ-नघो-र बर्षाले उनी गौंडामु-खबाट महेन्द्रपुल फर्किन सकिनन् । महेन्द्रपुलमा राती साँढे ८ बजेतिर अचानक सडक भा-सि-एको थियो ।
पार्किङ गरिराखेको गाडी अगाडी भा-सि-एको सडक विस्तारै बढ्न थाल्यो । राती नै प्रहरी टोलीले सडक थप भा-सि-न नदिन बर्षाको भे-ल त-र्का-ए । भा-सि-ने क्रम रोकिएन । मायाको घर अगाडी फु-ट-पा-थसम्मै खा-ल्डो प¥यो । सडकमा परेको खा-ल्डो घरतर्फ बढेकाले वरीपरी बासिन्दा रा-तभरी नि-दा-उन पाएनन् । सडक भा-सि-एका कारण तत्काल ५ घर जोखिममा देखियो । मायाकी छोरी यु-की रातभरी सुत्न पाइनन् । भा-सि-ने क्रम घरतर्फ बढेर घर नै गड्ने हो कि चि-न्तामा थिइन् ।
भा-सि-एको ठाउँमा पानी झ-र्न छाडेपछि भा-सि-न पनि कम भएको स्थानीय बताउँछन् । मायाले महेन्द्रपुलमा उक्त घर बनाएको १८ बर्ष भयो । अहिलेसम्म यस्तो जोखिम बे-हो-र्न नपरेको उनले सुनाइन् । ‘१८ बर्षअघि ट-ह-रा थियो, त्यसपछि हामीले घर बनाएका हौं,’ उनले सेतोपाटीलाई भनिन्, ‘अहिलेसम्म यस्तो भएको थिएन ।’ उनको घरअगाडी सडकमा केही समयअघि मात्रै पोखरा -खानेपानी आयोजनाले पाइपलाइन बि-छ्या-उन खा-ल्डो खनेको थियो । खानेपानी आयोजनाले पाइप बि-च्छ्या-एर पु¥यो तर समयमै का-लो-पत्रे गरेन । खा-ल्डो राम्रोसँग नपुरेका कारण भा-सि-एको हुन सक्ने मायाको आ-शंका छ । भा-सि-एको ठाउँमा एउटा विजुलीको पो-लसमेत परेको छ ।
पोखराका जमिन यसरी अ-चा-नक आफैं ग-डे-र खा-ल्डो बन्ने क्रम बढ्दै गएको छ । पोखराका समथर जमिन आफैं भित्र ग-डि-रहेको छ । आफै भित्र गडेर गएको ठाउँमा खा-ल्डा परिरहेको छ । महेन्द्रपुलमा जस्तै पोखराको ब्यस्त चि-प्लेढु-ङ्गामा गत असार २० गते सडक भा-सि-एको थियो । कालोपत्रे सडक अ-चा-नक भा-सि-एर खा-ल्डो परेको थियो । साँझपख सडकमा परेको खा-ल्डोले दु-र्घ-ट-ना हुन नदिन तत्काल महानगरले डो-जर लगाएर खा-ल्डो पुरेको थियो ।
यस्तै खा-ल्डो केही महिनाअघि पोखरा महानगर वडा नं. ४ वडा कार्यालय अगाडी पनि परेको थियो । रोकिराखेको ट्रकका पाँ-ग्रा भा-सि-एको ठाउँमा गडेको वडा अध्यक्ष शंकर बास्तोलाले बताए । उनका अनुसार यसरी सडक भा-सि-ने क्रम बढिरहेकाले वडाबासीको गुनासो आउने गरेको बास्तोलाले बताए ।
पोखरामा अहिले खानेपानी आयोजना विस्तार गर्न जाइकाले काम गरिरहेको छ । नयाँ पाइपलाइन वि-छ्या-उन धमाधम सडक फो-रिए-का छन् तर समयमै कालोपत्रेको काम गरेका छैनन् । जसले गर्दा सडक भा-सि-ने क्रम बढेको वडा अध्यक्ष बास्तोलाले बताए । पोखराका जमिन भा-सि-नुको कारण बुझ्न १२ हजार बर्षअघि पोखरा उपत्यकाको भुगोल निर्माणको चरण बुझ्नुपर्ने भुगोलविद् प्राध्यापक खगेन्द्र पौडेलले बताए ।
हालको पोखरा उपत्यका बन्न १२ हजार बर्षअघि आएको भुकम्प पश्चात अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खलाबाट आएको हिमपहिरोले पु-रि-एर पोखरा उपत्यका निर्माण भएको उनले बताए । त्यसपश्चात झण्डै ७, ८ हजार बर्षअघि अर्को भुकम्प र पहिरो आएको थियो भने झण्डै ८ सय बर्षअघि आएको अर्को पहिरोले अहिलेको पोखरा निर्माण भएको पौडेलले बताए ।
३ चरणमा आएको भुकम्प पश्चात हिमपहिरोले पुरिएर बनेको पोखरा उपत्यकाको जमिनमा पनि चुनयुक्त मा-टो मि-सि-एको छ । भूगर्भविद्हरु पोखरा उपत्यकाको निर्माणलाई २ वटा फर्मेसनमा व्याख्या गर्छन् । एउटा घा-चो-क फ-र्मे-न र अर्को पोखरा फर्मेसन । १२ हजार बर्षअघि आएको हिमपहिरोले पु-रि-एर बनेको जमिनलाई घा-चोक फर्मेसन भनेर बुझिन्छ ।
उक्त फ-र्मे-सनभित्र पोखराको सेती नदीदेखि लेखनाथतर्फको भु–भाग बुझिने पौडेलले बताए । पोखरा फर्मेसन भन्दा घाचोक फर्मेसन पुरानो भएकाले जमिनको खँदिलो भएको पौडेलले बताए । माछापुच्छ«े गाउँपालिकाको भेडाबारीदेखि पोखरा बजार हुँदै तनहुँको भिमादसम्मको उपत्यका अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खलाबाट आएको हिमपहिरोले पु-रिए-र बनेको उनले बताए ।
अहिले पोखरामा भा-सिरहेको ठाउँ पोखरा फर्मेसनअन्तर्गत पर्दछ । करिब ८ सय बर्षअघिको हिमपहिरोले पु-रिएर बनेको पोखरा फर्मेसनको जमिन राम्रोसँग जमेका छैनन् भने चुनयुक्त माटो जमिनमुनि रहेकाले पानी छिर्नासाथ प-ग्लेर भा-सिने क्रम बढेको पौडेलले बताए । काशबाट परेको पानी वा खोलाको पानीमा अ-म्ली-य पदार्थ बढी हुनु र त्यो पानी जमिनभित्र छिर्दा सतहमा भ्वा-ङ पर्ने गरेको अर्का जि-यो-टेक इञ्जिनियर नारायण गुरुङले बताए ।
चुनयुक्त माटोमा अ-म्ली-य पानी मि-सिँ-दा छिटो प-ग्लने र चु-न बगेर जाँदा सतहमा भ्वा-ङ पर्ने गरेको उनले बताए । ‘जमिनभित्रको चुन प-ग्लदा खो-क्रो हुन्छ, माथि जमिनको सतहको भा-र था-म्न नसकेपछि भा-सिने हो,’ गुरुङले भने, ‘त्यही भएर पानी पर्नासाथ पोखरामा भ्वा-ङ पर्छ ।’